Ọrụ nhicha Burgos
Real Estate Listings: » Business Directory » Cleaning Contractors » US » Connecticut » Ọrụ nhicha Burgos1
Bipụtara 1 year ago
Koodu nzipu ozi: 06114
Ọrụ nhicha Burgos bụ ọkachamara na azụmaahịa, ndị na-ehicha ụlọ na ebe a na-ehicha ọfịs. Ije ozi na steeti niile na Connecticut na steeti ndị gbara ya gburugburu, anyị nwere obi ụtọ ịnye ogo kacha mma na uru maka mkpa nhicha gị. Obi siri anyị ike inye gị afọ ojuju 100%.
Onweghị nọmba ekwenxxxx Gosi
Aha ya 7. Nov 2019
Kpọtụrụ onye na-akpọsa ngwa ahịa Onweghị nọmba ekwenxxxx
Họrọ udiAccommodations Spare roomsResidential homes Houses Apartments Flats Condos Townhouses Units Villas Homes Foreclosed HomesLand lots Residential Land Agricultural Land Industrial LandCommercial Real Estate Office spaces Business Premises Buildings of free appointmentAll Others Real Estate All Others Real EstateBusiness Directory Financial Service Providers Moving Companies Home Improvement Contractors Home Inspection Services Construction Companies Cleaning Contractors Design Services Furniture Companies Photography ServicesReal Estate Agent Directory Real Estate Agents Real Estate Brokers Property Managers
Ofdị azụmahịa Ere ya Maka mgbazinye
Aha ya November 7, 2019
Connecticut (na-ege ntị) bụ steeti ndịda kasị ọhụrụ na mpaghara New England nke dị na ndịda ọwụwa anyanwụ United States. Dika onuogugu nke 2010, o nwere ego mmadu kachasi na mmadu, Human Development Index (0.962), na onu ulo nke United States na United States. Akụkụ ya bụ Rhode Island n'akụkụ ọwụwa anyanwụ, Massachusetts n'ebe ugwu, New York n'akụkụ ọdịda anyanwụ, na Long Island Sound dị na ndịda. Isi obodo ya bụ Hartford na obodo ya kacha biri na ya bụ Bridgeport. Ọ bụ akụkụ nke New England, ọ bụ ezie na a na-ejikọ ụfọdụ akụkụ ya na New York na New Jersey dị ka mpaghara steeti atọ. Steeti akpọrọ maka Connecticut River nke ga -emechi steeti. E si na mkpụrụ okwu Algonquian wee nweta okwu “Connecticut” sitere na “osimiri ogologo mmiri.” Ndị mbụ biri na Europe bụ ndị Dutch bụ ndị guzobere obere mmebi dị mkpụmkpụ akpọrọ Fort Hoop na Hartford na nnabata nke Park na Connecticut Osimiri. Ọkara nke Connecticut bụ akụkụ mbụ nke Dutch Dutch na-achị New Netherland, nke gụnyere ọtụtụ ala n'etiti Connecticut na Delaware Rivers, ọ bụ ezie na ndị Bekee guzobere nnukwu mbu na 1630s. Thomas Hooker duuru ndị otu sitere na Massachusetts Bay Colony wee hibe ya na Connecticut Colony; ndị ọzọ biri na Massachusetts hiwere Saybrook Colony na New Haven Colony. Ógbè ndị Connecticut na New Haven guzobere akwụkwọ nke isi ego, bụ ihe mbụ dị na America. N'afọ 1662, ndị chịkọtara atọ ahụ jikọrọ aka n'okpuru akwụkwọ ikike ndị eze, na-eme ka Connecticut bụrụ alaeze ukwu. Nke a bụ otu n'ime ndị Gọvanọ iri na atọ jụrụ ọchịchị Britain na Nhazi ndị America. Connecticut bụ obodo nke atọ kachasị nta na mpaghara, obodo nke 29, na nke anọ ndị mmadụ biri na steeti iri ise. A maara ya dị ka "Constitution State", "Nutmeg State", "Provkpụrụ", na "Ala Steady Habits". Ọ rụpụtara ọrụ mmepe nke gọọmentị etiti nke United States (lee Connecticut Compromise). Osimiri Connecticut, Osimiri Thames, na ọdụ ụgbọ mmiri ndị dị na Long Island emeela ka Connecticut nwee ọdịbendị mmiri siri ike nke na-aga n'ihu taa. Steeti nwekwara ogologo akụkọ ntinye aka na ụlọ ọrụ ọrụ ego, gụnyere ụlọ ọrụ inshọransị na Hartford na oke ego na Fairfield County.
Otu edemede niileUlo oluLọ obibiNzaReallọ AzụmaahịaNdị ọzọ niile nwere ala na ụlọNtuziaka AzụmaahịaAkwụkwọ ikike ụlọ